"Iminyaka Elikhulu Yokuba Wedwa" nguGG Márquez phakathi kweyona ncwadi ifundwayo | Uncwadi lwangoku
"Iminyaka Elikhulu Yokuba Wedwa" ebhalwe nguGG Márquez phakathi kweyona ncwadi ifundwayo
Ukuba sitsho ngaphandle koko UGabriel García Márquez Ungoyena mbhali ufundwa kakhulu eLatin America ngalo lonke ixesha, asoyiki kakhulu ukuba siphazame. Ubhale iincwadi ezingenakubalwa kwaye yeyiphi engcono, kodwa eyona ncwadi ifundwayo ngaphandle kwamathandabuzo "Iminyaka Elikhulu Yokuba Wedwa", epapashwe ngo-1967.
"Iminyaka Elikhulu Yokuba Wedwa" yinoveli engumfuziselo ye boom kunye nomsebenzi wobugcisa ubunyani bomlingo. Ibalisela ibali lezizukulwana ezisixhenxe zosapho olutshutshiswa ngekamva elibulalayo, elishwankathela ngokuguqukayo intlalo nezopolitiko zelizwekazi.
1.1 Isiseko seMacondo
2 Amanye amabinzana amabali athi "Iminyaka Elikhulu Yokuba Wedwa"
"Iminyaka Elikhulu Yokuba Wedwa" ibonakalisa ukwahlulwa kunye nokudakumba komntu kwisaga yaseBuendía kunye nenyani yaseMelika kwindawo yasentsomini yeMacondo. Ngomthamo ophuphumayo webali, i-GG Márquez ime ngexesha lokujikeleza apho yonke imihla kunye nezinto ezimangalisayo zididekile.
UJosé Arcadio Buendía kunye no-ularsula Iguarán batshata nangona bengabazala. Bemka eRiohacha bafumana idolophu eyaziwa ngokuba yiMacondo.
Idolophu le ihlupheka ziimfazwe ezahlukeneyo, iinguqu kurhulumente kwezopolitiko zangaphakathi kunye notshintsho olunefuthe kubomi bosapho. IMacondo, ke, iyayeka ukuba yindawo yasentsomini yokuba yindawo enamashishini.
Isibini sokugqibela kwisisa saseBuendía, u-Aureliano Babilonia kunye nomakazi wakhe u-Amaranta Úrsula, utata womntwana onomsila wehagu. Ukuphela komgca kuyasondela, kuba umama uzakufa emva kokubeleka kwaye umntwana uza kutyiwa ziimbovane. U-Aureliano Babilonia emva koko wafunda umsongo apho i-gypsy Melquíades, umlinganiswa ovela ekuqaleni kwinoveli, wayebhale imbali yosapho lwakhe kwiminyaka elikhulu ngaphambili.
Amanye amabinzana amabali athi "Iminyaka Elikhulu Yokuba Wedwa"
"Into ebalulekileyo ayikokuphulukana nokuziqhelanisa."
"Bendingayiqondi indlela yokuya emfazweni ngokugqithileyo malunga nezinto ezingenakuchukunyiswa ngezandla."
"Mna, kwelam icala, ngoku ndiyaqonda ukuba ndilwela ikratshi."
Anqabe kangakanani amadoda. Bachitha ubomi babo besilwa nababingeleli kwaye banika iincwadi zemithandazo.
"Imfihlo yokwaluphala elungileyo ayisiyonto ngaphandle kwesivumelwano esinyanisekileyo nesizungu."
"Esona sikhalo sidala kwimbali yoluntu sisikhalo sothando."
"Awufi xa kufanelekile, kodwa xa unako."
"Ngokuzama ukumthanda, wagqibela ukumthanda."
"Ubudala obuphaphileyo bunokuchaneka ngakumbi kunemibuzo esemgangathweni."
"Ulahlekelwe yedwa ngamandla akhe amakhulu, waqala ukulahleka indlela yakhe."
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » "Iminyaka Elikhulu Yokuba Wedwa" ebhalwe nguGG Márquez phakathi kweyona ncwadi ifundwayo
Soloko uDon Juan Tenorio, iklasikhi ebalulekileyo yale mihla